खोप « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
जे एण्ड जे खोप लगाएकाहरुले बुस्टर डोजमा अन्य खोप लगाउन मिल्छ ?
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाएर ६ महिना कटेका व्यक्तिहरुले बुस्टर मात्रा लगाउन सक्ने स्पष्ट पारेको छ । जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाएका
कोभिड–१९ विरुद्धको ५६ हजार ९०८ मात्रा खोप खेर गयो: खोप छानबिन समिति
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गठन गरेको कोभिड–१९ विरुद्ध खोप छानबिन समितिले ५६ हजार ९०८ मात्रा खोप खेर गएको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई
कोरोनाविरुद्धको २४ लाख डोज खोप नहराएको छानबिन समितिको निष्कर्ष
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । कोभिड–१९ विरुद्ध २४ लाख मात्रा खोप हराएको भनिएको घटना छानबिन गर्न बनेको समितिले खोप नहराएको निष्कर्ष निकालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ चिकित्सक डा गुणराज लोहनी
१३ लाख १२ हजार ८० डोज एस्ट्राजेनेका खोप नेपाल आइपुग्यो
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । बेलायतबाट १३ लाख १२ हजार ८० डोज एस्ट्राजेनेका खोप नेपाल आइपुगेको छ । कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत बेलायतबाट थप १३ लाख १२ हजार ८० डोज एस्ट्राजेनेका खोप
चितवनका ५६ हजार बढी बालबालिकाले लगाए मोडर्ना खोप
जनस्वास्थ्य सरोकार, चितवन । जिल्लामा १२ देखि १७ वर्षसम्मका ५६ हजार ७८१ बालबालिकाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् । मोडर्ना खोप अभियानअन्तर्गत विद्यार्थीलगायतका बालबालिकालाई खोप लगाइएको हो । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका
जुम्लाका ६९ हजारले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप
जनस्वास्थ्य सरोकार, खलङ्गा । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका करिब ८५ प्रतिशत नागरिकले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका छन् । जिल्लाका ६९ हजार ३३२ जनाले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको जनस्वास्थ कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेमबहादुर
फागुन १ गते देखि १८ वर्ष माथिका सबैलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर मात्रा दिइने
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सरकारले फागुन १ गते देखि १८ वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर मात्रा दिने भएको छ । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले कोरोना
नेपालमा झण्डै ७ लाखले लगाए कोभिड विरुद्धको बुस्टर खोप, पूर्ण मात्रा लगाउने कति ?
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । नेपालमा कोभिड-१९ विरुद्धको बुस्टर खोप लगाउनेको संख्या ६ लाख ७२ हजार ५४८ पुगेको छ । सरकारले कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भएदेखि फ्रन्टलाइनरको रुपमा कार्यरत र ज्येष्‍ठ
डोटीका २७ हजार विद्यार्थीले लगाए मोडर्ना खोप
जनस्वास्थ्य सरोकार, डोटी । जिल्लामा रहेका २७ हजार ३०० विद्यार्थीलाई कोरोनाविरुद्धको मोडर्ना खोपको दोस्रो मात्रा लगाइएको छ । यसभन्दा पहिले पहिलो मात्राको खोप लगाइसकेका १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका
मनाङमा हिमपात रोकियो, बुस्टर खोप पुनः सञ्चालन
जनस्वास्थ्य सरोकार, मुस्ताङ । न्यून चापीय प्रणाली प्रवेश गरेकाले हिमाली जिल्ला मनाङमा यसवर्ष भारी हिमपात भयो । हिमपातका कारण यहाँ भर्खरै सुरु भएको कोरोना विरुद्धको खोपको बुस्टर मात्र अभियान रोकिएकामा
मंकीपक्सको संक्रमण फैलिनसक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो सर्तक रहन अपिल
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । मंकीपक्सको संक्रमण फैलिनसक्ने भन्दै सरकारले विशेष सावधानी अपनाउन आम नागरिकहरुलाई आग्रह
‘मङ्कीपक्स फैलिँदा विश्वलाई गम्भीर चुनौती’ -डब्ल्यूएचओ
जनस्वास्थ्य सरोकार । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) का प्रमुख टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले यतिबेला विश्व कोभिड,
भरतपुर अस्पतालको ओपिडी टिकट बिहान ७ बजेबाट
जनस्वास्थ्य सरोकार, भरतपुर । भरतपुर अस्पतालले सातामा पाँच दिन बिहान ७ बजेबाट नै ओपिडी टिकट